शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आलोचन | Seto Khabar
शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आलोचन
काठमाडौँ, जेठ १३ । दुई तिहाईको दम्भमा पनि जनतालाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको कडा आलोचन गरेका छन्। अधिकांश सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएको हो ।
सरकारलाई निषेधभन्दा पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको छ भने, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहलाई पनि हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न सांसदहरुले आग्रह गरे ।
उक्त बैठकमा बोल्दै सांसद लक्ष्मी परियारले देशमा कम्युनिष्टको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि जनता आतंकित भएर बाँच्नु परेको जनाइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘देशको मुटु काठमाडौँ, काठमाडौँको मुटु घट्टेकुलो र सुकेधारमा बम विस्फोट भएको छ । जनतालाई सुरक्षित अनुभूति गराउन नसक्ने सरकारको के औचित्य ?जनताले सरकारलाई कहाँ खोज्न जाने ? ।
यसैक्रममा, सांसद लालकाजी गुरुङले काठमाडौँमा बम विस्फोटका घटनामा जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको बेला सरकार के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सरकारले निषेध गर्न खोज्दा यो समस्या उत्पन्न भएको जिकिर थियो । ‘दुई तिहाईको दम्भ देखाउने भन्दा पनि वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सांसद बहादुर सिंह लामाले पनि सरकारले दिउँसै शान्ति सुरक्षा दिनसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा बोलाई समास्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शान्ति दिन नसक्ने सरकारको दुई तिहाइको दम्भको औचित्य नरहेको जनाए।
यसैगरी, सांसद शान्ता चौधरीले अपराधिक संस्कृतिले जनतलाई त्रसित भएको जनाइन् । उनले बम आतंकको भत्सर्ना गर्दै विप्लव समूहलाई आतंक होइन सहकार्यको लागि आग्रह गरिन् ।
‘जनताले रगत होइन विकास मागेको छ । आतंक होइन उज्यालो बाँड्नु छ,’ उनले भनिन्, ‘गोल बमबारुदको आतंक बन्द गर्न आग्रह गर्छु, साथै सरकारले पनि उचित कदम चालोस् ।’
दुई तिहाईको कम्युष्टि सरकार अर्धनिन्द्रा रहेको भन्दै शान्तिको सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारसँग के आशा गर्नु ? भन्दै सांसद सीता देवी यादवले सरकारको आलोचना गरिन् ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा छ भनेर सरकारले झुटो आश्वासन मात्र दिएको आरोप सांसद सुजाता परियारले लगाइन् । ‘गृहप्रशासन के हेरेर बसिरहेको छ,’? उनले भनिन् ।
यसैक्रममा, बम काण्ड मच्चिरहँदा ‘यही हो सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल रु’ भनेर सांसद हिरा गुरुङले प्रश्न गरिन् । उनले भने, ‘दुई तिहाइको दम्भमा कता हरायो शान्ति र सुरक्षा ?,’।